Iyo 2014 Diki Bhizinesi Kushambadzira Wishlist | Martech Zone
Inogona here gore ra2014 kuti rive iro gore iro isu tese patinomira tichidzingirira zvinhu zvinopenya uye tichidzokera kune akaedza uye echokwadi marongero ekushambadzira? Mukomana, ndinovimba kudaro… takaona makambani mazhinji achidzingirira mamwe mapenzi mumakore mashoma apfuura. Panguva iyo mabhajeti avo aoma pasina zvibereko, ndosaka vaizopedzisira vatipa runhare. Paive nezvakawandisa zvekuverenga uye zvakashandura dumbu rangu kutarisa mamwe emakambani eetekinoroji nemasangano achiburitsa mari nekutora matani emari kubva mumabhajeti mazhinji emabhizinesi madiki akatendeseka.
Maererano j2 Global Forecast Ongororo:
28.16% inoda kuwedzera kuvapo kwavo online, sekumisa webhusaiti kana chitoro chepamhepo.
23.61% inoda kutora email kushambadzira otomatiki kuti zvive nyore uye nemazvo kusvika kune vatengi.
20.52% inoda kushandisa email kukurudzira zvinomutsa uye kugovana pasocial network.
13.76% inoda kuita yepamhepo kushambadzira yakanakisa maitiro eemail uye webhusaiti optimization.
11.05% inoda kuona kuti yavo yekushambadzira yeemail haigumire mumasefa e spam kana ma tabo eGmail.
Ndiri kuda kuziva kuti kupi mavhidhiyo ekutengesa nzira vaive pachidzidzo. Dai paive paine mukaha mumaonero angu, zvingave kuti mabhizinesi madiki anogona ikozvino kunyorera kune akati wandei anodhura evhidhiyo yekushambadzira masevhisi kuti vabudise meseji yavo. Izvi zvinozovabatsira kukwikwidza nemabhajeti akakurisa kupfuura avo uye kuhwina.
Tags: 2014 chishuwo chinyorwaej2 Pasi rosej2 Global Forecastj2 Global Forecast OngororoYeMahara neThebhu Kushambadziramobile marketingBhizinesi duku